ह्वात्तै बढ्यो उपत्यकामा कोरोना परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ३ ह्वात्तै बढ्यो उपत्यकामा कोरोना परीक्षण गराउनेको सङ्ख्या
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो साता कोभिड–१९ सङ्क्रमित देखिन थालेसँगै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा परीक्षणका लागि आउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । वैशाखको अन्तिमसम्म दैनिक २० देखि ६० जनासम्म परीक्षणका लागि आउने गरेकामा जेठ महिनामा दैनिक झण्डै ७०० परीक्षणका लागि आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कतिपय व्यक्ति भने उपत्यकाकै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा पनि कतै आफू सङ्क्रमित भइहालेँ कि भनी जचाउन आइरहेका छन् । कतिपय व्यक्ति तरकारी पसल वा अरु कुनै पसल खोल्नका लागि आफूलाई सङ्क्रमण छैन भनि प्रमाणित गराउनका लागि आइरहेका छन् । बैङ्कलगायतका संस्था खुल्दा पहिले बिदाका बसेका कर्मचारी पनि कोभिड–१९ परीक्षण गर्न आएका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा पनि भिडभाड भइरहेका कतिपय कार्यालयका कर्मचारी पनि परीक्षणका लागि आइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा अहिले झण्डै पाँचदेखि ७०० सम्म कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि आइरहेकामा धेरै व्यक्तिमा सङ्क्रमणको सम्भावना नरहेको अस्पतालका निर्देशक डा सागर राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार जो व्यक्तिमा सङ्क्रमणको सम्भावना छैन भने उसलाई सबै विवरण सुनेर अस्पतालले हरियो कार्ड (सङ्क्रमण नभएको प्रमाणपत्र) दिएर घर फर्काउने गरेको छ । अस्पतालमा आएकामध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिमा सङ्क्रमणको सम्भावना नभएपनि उनीहरु डराएर जाँच गर्न आइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अस्पताल आउनेमध्ये हामीले आवश्यकको मात्रै नमूना सङ्कलन गरिरहेका छौँ ।’
काठमाडौं । नाट्य प्रस्तुतिमा शैली थिएटरले फेरि ‘विश्व बालकविता महोत्सव–२०७७’ आयोजनाको घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम घटाउन सरकारले लकडाउन गरेपछि बालबालिकाहरू घरमै...
Uncategorized Dhruba Lamsal - October 11, 2020 0
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - July 13, 2020 0
प्रदेश २ Dhruba Lamsal - July 16, 2020 0
Not-to-be-missed Kumar Raut - August 31, 2020 0
वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर १६६ पुगेको छ । कोरोना संक्रमणबाट दैलेखका एक...
Exclusive Roshan Shrestha - June 17, 2020 0
रुपन्देहीमा कोरोनाबाट अनमीसहित दुई जनाको मृत्यु
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - November 10, 2020 0
बुटवल । रुपन्देहीमा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक अनमीसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका—१० निवासी ४८ वर्षीया महिलाको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचारका...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - April 16, 2021 0